Ndị Na-eto Eto Nọ na Jọjia Chetara Onye Kere Ha
Ọtụtụ n’ime ndị anyị gụrụ banyere ha na peeji ndị bu nke a ụzọ bụ ụmụ okoro na agbọghọ ndị ‘chetara Onye Okike Ukwu ha n’oge ha bụ okorobịa.’ (Ekli. 12:⁠1) Ndị ọsụ ụzọ e nwere na Jọjia dị puku atọ, otu narị na iri itoolu na asaa. Ma, ihe dị ka otu puku na iri isii na ise n’ime ha bụ ụmụ okoro na agbọghọ na-agafebeghị afọ iri abụọ na ise. Olee ihe mere ọtụtụ ndị na-eto eto e nwere na Jọjia ji na-eme nke ọma n’ọgbakọ?
E nwere ọtụtụ ihe nwere ike ịkpata ya. Otu n’ime ha bụ na a bịa n’ezinụlọ ọ bụla e nwere na Jọjia, onye ọ bụla na ibe ya na-adịkarị n’ezigbo mma. Nwanna Konstantine, bụ́ onye zụrụ ụmụ ya ise n’ọgbakọ kwuru, sị: “Ihe mere m ji bata n’ọgbakọ bụ na ama m na Jehova bụ ezigbo Nna. N’ihi ya, mgbe m mụrụ ụmụ, m chọrọ ime ka obi na-eru ụmụ m ala mgbe ọ bụla mụ na ha nọ.”
Nwanna Malkhazi na nwunye ya mụrụ ụmụ atọ. Ha gbasiri mbọ ike ka ha na ụmụ ha dịrị n’ezigbo mma. Nwanna Malkhazi kwuru, sị: “Ọ na-abụ anyị gụrụ gụrụ, anyị agwa ụmụ anyị ka ha chee banyere ihe na-amasị ha n’ebe anyị na ụmụnne ha nọ. O ruzie n’oge ofufe ezinụlọ anyị, anyị agwa ha ka ha kwuo ihe ha chetara. Ihe a anyị na-eme emeela ka ha na-achọpụta ebe onye ọ bụla na-eme nke ọma, meekwa ka ha na-ahụ ibe ha n’anya.”
“M Jizi Ndụ M Eme Ihe Bara Uru”
Ndị okenye na-enyekwara ndị nne na nna aka n’ịzụ ụmụ ha. Otú ha si eme ya bụ na ha na-ebido n’oge kenye ndị na-eto eto ọrụ n’ọgbakọ. Dị ka ihe atụ, Nwanna Nestori, bụ́ onye e mere baptizim mgbe ọ dị afọ iri na otu kwuru, sị: “Ndị okenye malitere mgbe m dị nnọọ obere na-enye m obere ọrụ ndị m ga na-arụ n’ọgbakọ. Ihe a ha mere mere ka m mara na m dị mkpa n’ọgbakọ.”
Ihe ọzọ na-eme ka ndị na-eto eto na-eme nke ọma n’ọgbakọ bụ na e nwere ụmụnna ndị ha na-amụta ezigbo ihe n’aka ha, ya na aka ndị okenye na-enyere ha. Nwanne Nestori aha ya bụ Koba kwuru, sị: “Mgbe m na-etolite, ejighị m ọgbakọ kpọrọ ihe ka ụmụnne m. Ma, e nwere otu nwa okorobịa bụ́ okenye m mụtara ihe n’aka ya. Ọ naghị akatọ m, ọ na-agbalị aghọta nsogbu m. O nyeere m ezigbo aka ịlọghachikwute Jehova.”
Taa, Nestori na Koba, na nwanne ha nwaanyị aha ya bụ Mari, na-eje ozi n’otu ime obodo. Koba kwuru, sị, “M jizi ndụ m eme ihe bara uru.”
“Ụmụ M Na-eje Ije n’Eziokwu Ahụ”
Alaka ụlọ ọrụ anyị dị na Jọjia na-enyekwara ndị nne na nna aka ịzụ ụmụ ha. Otú ha si eme ya bụ na ha na-akpọ ndị na-eto eto ka ha soro na-arụ ụlọ ndị nzukọ Jehova na-arụ. Dị ka ihe atụ, otu onye so na Kọmitii Alaka kwuru, sị: “Anyị ji ndị na-eto eto anyị kpọrọ ihe. N’ihi ya, anyị na-akwado ha ka ha na-agbalị ime ihe ndị ha chọrọ ime n’ozi Jehova.”
Ndị a bụ ụfọdụ Ndịàmà Jehova nọ na Jọjia na ụmụnna si mba ọzọ bịa. Ha niile so rụọ ọrụ mgbe a na-arụ Ụlọ Mgbakọ dị na Tibilisi
Ndị na-eto eto ndị a anaghị echefu ihe ndị ha mụtara n’aka ụmụnna ndị ahụ bụ́ aka ochie ha so rụọ ọrụ. Dị ka ihe atụ, Nwanna Mamuka, so ndị ọrụ si mba ọzọ rụọ ọrụ mgbe a na-arụ Ụlọ Mgbakọ dị na Tibilisi. O kwuru, sị: “Ọrụ a anyị na ndị si mba ọzọ so rụọ mere ka m mụta ọtụtụ ihe n’aka ndị ọzọ. Ọ bụ eziokwu na amụtara m ọtụtụ aka ọrụ, amụtakwara m ọtụtụ ihe mere ka mụ na Jehova dịkwuo ná mma.”
Otú ndị nọ n’ezinụlọ na ibe ha si dị n’ezigbo mma, aka ndị okenye na-enyere ndị na-eto, nakwa ụmụnna ha na-amụta ezigbo ihe n’aka ha, enyerela ọtụtụ ndị na-eto eto e nwere na Jọjia aka ịna-eme nke ọma n’ọgbakọ. Obi dị ndị mụrụ ndị na-eto eto ndị a otú ahụ ọ dị Jọn onyeozi, mgbe o kwuru, sị: “Ọ dịghị ihe ọzọ ga-eme ka m nwee obi ekele karịa ihe a, ya bụ, na m ga na-anụ na ụmụ m na-eje ije n’eziokwu ahụ.”​—⁠3 Jọn 4.
Ịsụgharị Akwụkwọ Anyị n’Asụsụ Ndị Ọzọ
N’afọ 2013, Òtù Na-achị Isi gwara alaka ụlọ ọrụ niile ka ha chọpụta ma à chọrọ akwụkwọ anyị n’asụsụ ndị ọzọ a na-asụ n’ebe dị iche iche alaka ụlọ ọrụ ha na-elekọta. Ihe mere ha ji kwuo ya bụ ka e jiri ha kwusaara ọtụtụ ndị ozi ọma.
Ihe a Òtù Na-achị Isi kwuru mere ka alaka ụlọ ọrụ anyị dị na Jọjia malite ịsụgharị ụfọdụ akwụkwọ anyị n’asụsụ Svan na Mingrelian. Asụsụ abụọ a yiri asụsụ Jọjin nke na ụfọdụ ndị na-ekwu na ha bụ olumba.
Ndị ọsụ ụzọ ji ozi ha kpọrọ ihe n’obodo Saneti kwuru, sị: “Ndị Svan nwere mmasị ife Chineke, ha ejighịkwa Baịbụl egwu egwu. Ndị na-anaghị anara anyị akwụkwọ na-anara ya ugbu a n’ihi na e dere ha n’asụsụ ha.”
Obi tọgburu ndị nkwusa na-asụ asụsụ Mingrelian atọgbu mgbe ha malitere inwe ọmụmụ ihe n’asụsụ ha. Otu nwa okorobịa bụ́ ọsụ ụzọ aha ya bụ Giga kwuru, sị: “Okwu na-agazị m were were n’ọnụ ma m zawa ajụjụ. Anaghịzi m ebu ụzọ eche otú m ga-esi ekwu ihe m ga-aza tupu mụ azawa ajụjụ.”
Nwanna Zuri, bụ́ okenye n’ọgbakọ dị na Takaị nke na-eji asụsụ Mingrelian amụ ihe kwuru otú obi dị ya. Ọ sịrị: “E nweela ọtụtụ ihe mere ná ndụ m gaara eme ka anya mmiri gbaa m, ma ndị ọma ma ndị ọjọọ, ma o nweghị nke mere ka anya mmiri gbaa m. Ma, n’ụbọchị mbụ anyị bụrụ abụ Alaeze anyị n’ọmụmụ ihe n’asụsụ Mingrelian, e nweghị onye nọ ebe ahụ anya mmiri na-agbaghị, ma mụnwa.”
Ihe Ndị Dị Mkpa Mere n’Oge Na-adịghị Anya
Otu ihe dị mkpa nke Ndịàmà Jehova nọ na Jọjia na-agaghị echefu echefu mere na Satọdee, abalị isii n’ọnwa Eprel afọ 2013. N’ụbọchị ahụ, Nwanna David Splane, onye so n’Òtù Na-achị Isi, nyefere Jehova ụlọ ndị a rụnyere n’alaka ụlọ ọrụ anyị dị na Jọjia. E nyefekwara Jehova otu Ụlọ Mgbakọ na ebe ọhụrụ a ga-anọ na-enwe ụlọ akwụkwọ anyị dị iche iche. Ihe dị ka narị mmadụ atọ na iri atọ na asatọ si mba iri abụọ na anọ bịara na Jọjia maka ihe omume a. Ụmụnna anyị ndị Jọjia nyekwara ha ụlọ, lekọtakwa ha nke ọma.
N’echi ya, Nwanna Splane kwuru okwu pụrụ iche. Puku mmadụ iri na ise na narị abụọ gere okwu a. Ọtụtụ n’ime ha nọ n’ebe dị iche iche anyị na-anọ enwe ọmụmụ ihe na Jọjia gee ya. Ha nọ na-ele ya na tiivi. E nwetụbeghị ụdị nnọkọ a ọtụtụ ndị bịara otú a na Jọjia. Otú ụmụnna anyị si gbarịta ibe ha ume na ụdị obi ụtọ ha nwere, na-emetụ n’ahụ́. Otu nwa okorobịa kwuru, sị: “Ihe a emeela ka m mara otú ụwa ọhụrụ ga-adị.”
Mgbe a na-enyefe Jehova alaka ụlọ ọrụ dị na Tibilisi n’afọ 2013
Ụlọ Akwụkwọ Ọmụmụ Baịbụl Maka Ụmụnna Lụrụ Di na Nwunye nke a na-akpọzi Ụlọ Akwụkwọ Maka Ndị Na-ekwusa Ozi Ọma Alaeze abarala ụmụnna anyị nọ na Jọjia ezigbo uru. Kemgbe afọ 2013, e nweela ihe karịrị narị ụmụnna abụọ garala ụlọ akwụkwọ a. Ụmụnna ndị a na-adị njikere iji obi ha niile jee ozi n’ebe ọ bụla e zigara ha n’ihi na obi dị ha ụtọ maka ihe a kụziiri ha.
‘Ha Na-amatị Onwe Ha Inweta Ihe Ndị Dị n’Ihu’
Otú ụmụnna anyị ndị mbụ batara n’ọgbakọ na Jọjia si kata obi kwusaa ozi ọma emeela ka e kwusaa ozi ọma ebe niile na mba a. Ihe a ha mere gosiri na ha hụrụ Chineke na ndị agbata obi ha n’anya, gosikwa na okwukwe ha siri ike, Jehova gọzikwara ha maka ya.
Taa, ihe karịrị puku ụmụnna iri na asatọ e nwere na Jọjia ji obi ụtọ na-ekwusa ozi ọma otú ahụ ndị mbụ ahụ mere. Ha na-eji Okwu Chineke enyere ndị agbata obi ha aka ịgbanwe ndụ ha.​—⁠Fil. 3:13; 4:⁠13.
Ndị a bụ ụmụnna ndị so na Kọmitii Alaka nke Jọjia. Ha bụ: Nwanna Wayne Tomchuk, Nwanna Levani Kopaliani, Nwanna Joni Shalamberidze na Nwanna Michael E. Jones